Dooda ku saabsan 4 kursi ee Guddiga FEIT Amray in Doorashadooda lagu noqdo (Qormo) | dayniiile.com
Home WARKII Dooda ku saabsan 4 kursi ee Guddiga FEIT Amray in Doorashadooda lagu...
Dooda ku saabsan 4 kursi ee Guddiga FEIT Amray in Doorashadooda lagu noqdo (Qormo)
Ma muuqdaan sababo madaxweyne Laftagareen ku kallifaya inuu dooda 3 kursi u adeegsado colaad qabiileed, neceyb reer KG, iyo ku xadgudubka RW Rooble. (W/Qoray: Dr. Mohamud M. Ulusow)
Khudbadda uu Madaxweyne Cabdiaziz Laftagareen u jeediyay Xildhibannada laga soo doortay DG Koofur Galbeed (DG-KG) kuna saabsaneyd 3 kursi ee Guddiga Hirgelinta Doorashada Heerka Federal (GHDHF) amray in doorashadooda lagu celiyo waxay daaha ka qaaday heerka aad u hooseeya ee uu marayo dhaqanka dowladnimo ee Soomaaliya iyo rajoxumada hano qaadka dowlad tayo leh oo ilaalinteeda aysan aheyn maaweelo.
Khudbada waxay kicisay shucuur badan. Madaxweyne Laftagareen uma hiilin runta, cadaaladda, garaadka wanaagsan ee dowladnimo, iyo nabad ku wada noolanshaha bulshada Soomaaliyeed. Ma muuqdaan sababo madaxweyne Laftagareen ku kallifaya in dooda 3 kursi uu adeegsado colaad qabiileed, neceyb reer KG, iyo ku xadgudubka RW Roble.
Xaqiiqada waxay tahay in mar kasta doorashada kuraasta 3 Xildhibaan ay ku jiraan gacanta DG-KG, lagana sugayn wax ay soo kordhin karin 74 kursi. Beelo iyo shakhsiyad ku nool DG-KG ayaa muddo dheer ka cabanayaa cadaalad darro ay ka sheegaanayaan Maamulka DG-KG ee Madaxweyne Laftagareen, haseyeeshe aan marna ku dhaqaaqin inay tabashadooda ka dhigan colaad iyo neceyb qabileed ama ku xadgudbaan Madaxda DG-KG.
Madaxweyne Laftagareen ma qiran, ma xusin in aan DG-KG keli ah la beegsan oo hal kursi ee ka mid ah 4 kursi ee GHDHF hakiyay ka soo jeedo DG Hirshabelle (DG-HSH). Waxaa nasiib darro ah in Madaxweyne Laftagareen labo wasiir ee ka mid ah Golaha Wasiirrada ku tilmaamo kuwa ka shaqeeya guriga RW Roble, taaso ah xadgudub ka baxsan dhaqanka dowladnimo. Sida hadda kor Madaxweyne Laftagareen uga hadlay, doorashada ka dhacday DG-KG waxay soo jiidatay indhaha, dareenka, iyo guuxa dadweynaha Soomaaliyeed.
Inkastoo mas’uuliinta xilka haysa ku dhirran yihiin inay Shacabka Soomaaliyeed u sheegaan been iyo marin habaabin badan, haddana shacabka shacabka waa ka dheregsan yihiin xulufeysiga, xadgudubyada, musuqmaasuqa, awood mororsiga dalka ka socda. 4 kursi oo GHDHF amray in doorashadooda dib loogu noqdo waxay kala yihiin:
1. HOP #154
2. HOP #103
3. HOP #204
4. HOP #086
Xaaladda 4 kursi isku mid ma ahan. Hal ku dhegga DG-KG oo ah “ Annaga GHDHF waxba nooma yeerin karo” ayaa Puntland, Jubbaland, iyo Galmudug ku dhiirrigeliyay inaysan ka amar qaadan GHDHF, kuna qasbay guddiyada doorashada, RW, iyo Beesha Caalamka inay culeyska saaran socodsiinta doorashada, dibna loo dhigo ka hadalka kuraasta laga cabanayo.
1. Xallinta Kursiga HOP #154 ee la yiri waxaa ku guuleystay Sareedo Maxamed Cabdalla waxay aheyd mid aad u sahlan waayo muranka kursigaas wuxuu la xiriiray arrin Farsamo ah, haseyeeshe ka falcelinta DG-KG wuxuu noqday “ annaga GHDHF wax nooma yeerin karo.” Saddexda Kursi kale ayaa guuxa iyo dareenka dadweynaha iyo kan Beesha Caalamka soo jiitay, waxayna halqabsi u noqdeen heerka xun ee musuqmaasuqa doorashada DG-yada ka dhacay gaaray:
1. HOP #103 waa kursi uu ku fadhiyay Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacbiga Maxamed Sheikh Cosman Jawaari, haddana la shaaciyay inuu ku guuleystay Maxamed Cali Xassan, oo Farmajo wato. Doodda ka taagan kursigaas waxay ku saleysan tahay saddex arrimood:
I. Dagaalka dalka dhan gilgilay oo Farmajo xilka Guddoomiyaha Golaha Shacbiga uga qaaday Jawaari kaaso la rumeysan yahay inuu weli socda;
II. Cabashada Jawaari oo sheegay in loo diiday ka qaybgalka tartankta kursigaaas si daahfuran, madaxbannaan, hagardaamo aysan ku jirin, madaama Madaxweyne Laftagareen la safan yahay Farmajo. DG-KG dheg jalaq uma siin cabashada Jawaari oo ilaa maanta idaacadaha taagan;
III. Sumcadda iyo saameynta Professor Jawaari ku leeyahay dib u dhiska Qaranka Soomaaliya oo Soomali badan iyo Beesha Caalamka ku tixgelineyso, kuna taagerayaan.
GHDHF wuxuu amray joojinta kursigaas haseyeeshe kaddib markii la soo weeraray dantu
#NlSA #Abdirshiid #salaad #official
Previous articleCali Xarbi: “Xildhibaanka aan dilay ee Sir David Amess waxa uu dhibaato ku ahaa Muslimiinta”
Next articleAKHRISO: Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Ukraine
Madaxweyne Xasan Sheekh Oo War Kasoo Saaray Dabkii Ka Kacay Isgoyska...
Dalkii ugu horreeyay oo casuumaad u fidiyay Madaxweyne Xasan Sheekh
Mohamed Abdullahi Mohamed - June 9, 2022 0